Degmada Sigtuna oo joojisay hilibka xalaasha | Somaliska
Degmada Sigtuna oo joojisay hilibka xalaasha
Kamuunka Sigtuna ee ka tirsan gobolka Uppsala Stockholm ayaa go’aan ku gaaray in ay joojiyaan hilibka xalaasha ah ee la siiyo ardada iskuulada. Arintaan ayaa ka dambeysay ka dib markii ay maamulka kamuunka sheegeen in ay dacwo fara badan uga timid waalidiinta caruurtooda aysan Muslimka ahayn, kuwaaasoo ka carooday in caruurtooda la siiyay hilib digaag oo xalaal ah.
Kamuunka ayaa sheegay in markii hore waalidiintu ay ka dacwoodeen in nidaamka loo qalo hilibka xalaasha ah uusan ahayn mid dhowraya xuquuqda xoolaha balse markii laga qanciyay arintaas ay ku dacwoodeen in aysan dooneyn in hilibka Muslimiinta la siiyo caruurtooda.
Ma ahan markii ugu horeysay ee dood ay ka dhalato hilibka xalaasha, iyadoo degmooyin badan oo ka tirsan Sweden ay ka taagantahay doodaan. Xisbiga cunsuriyada ah ee Sverigedemokraterna (SD) ayaa qeyb weyn oo siyaasadooda ka mid ah ka dhigay joojinta hilibka xalaasha ah, iyagoo olole balaaran oo ka dhan ah Muslimiinta ka wada daafaha Sweden.
Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiyada Folkpartiet & kristdemokraterna
November 16, 2014 at 14:40
Sigtuna waxeey katirsanthy stor Stockholm gör om gör rätt.
November 17, 2014 at 10:59
Khudaarta iyo kaluunka caruurta hala siiyo. Awalba hilibka caafimaad kuma jiro.
Khudaarta iyo kaluunka caruurta hala siiyo. Awalba hilibka caafimaad kuma jiro. dhaqankii wadanka oo ahaay cad iyo caano halago badalo Khudaarta iyo kaluunka
Abu walad aboo little boy arab gay. says:
November 24, 2014 at 08:15
Anigu waxaan oran lahaa hala badsado fläsk waa d,c,e,a vitamin.
Qaansiirku waa cunada ugu qaymaha badan lafaheena iyo jirka.
Aad baan uga xunahay.Hadii aynu nahay ardayda wax kabarata skolada Sigtuna.Somaliska waad kumahadsan tihiin shaqada aad noo haysaan